waxaa maamula 20-05-29
Nidaamka Balanqaadida 5aad: Balanqaad furfuran oo daacad ah 1. Shirkaddeena si dardar leh ayey u xoojineysaa dhismaha sumcadda iyo is-edbinta, si adag ayey u hoggaansan tahay sharciga ilaalinta macaamiisha 'xuquuqda iyo danaha, si dhab ah u fuliya waajibaadka hawlwadeennada ganacsiga, .. .
Qeybtii ugu horreysay ee sahaydii sariiraha ICU ee cusbitaalka pukang ee aagga faafa ee Malaysia ayaa si guul leh loogu wareejiyay.
Kuala Lumpur, Abriil 6 (AFP) - ilaa 12 PM maanta, noro coronavirus-ka Malaysia ayaa xaqiijiyay 131 kiis iyo 62 dhimasho ah, taas oo tirada guud ee la xaqiijiyay ay noqotay 3,793. Maanta, 236 qof ayaa laga soo saaray cusbitaalka, taasoo tirada guud ee bukaannada la soo ceshay noqotay 1,241. Intaa waxaa dheer, a ...
Hal maskax in laga hortago oo la xakameeyo cudurka faafa — HEBEIPUKANG CUDURAHA CAAFIMAADKA CO., LTD. ugu deeqay alaabo iyo agab lagula dagaallamo COVID-19
Sannadka cusub wuxuu bilaabmayaa 2020, Faafinta iyo horumarka COVID-19 wuxuu saameeyaa nolosha caadiga ah ee qoysas badan.Macallimiin ka shaqeeya WuHan iyo meelo kale oo dalka ah ayaa ka shaqeynaya safka hore ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurka .In si loo ilaaliyo si wanaagsan loo ilaaliyo caafimaadka dadka, XuShui ...